Abavelisi beemveliso kunye nabaxhasi-Ukupakisha iZiling
Uxinzelelo lweLiner yeLineal yoValo
I-liner yenziwe ngezinto ze-foam ezifakwe uxinzelelo oluphezulu lobuzaza. Le liner ikwabizwa ngokuba lilitha elinye. Inika itywina eliqinileyo ngokuncamathela kwisitya ngoxinzelelo kuphela. Ngaphandle kwetywina kunye nezixhobo zokufudumeza. njenge-liner eshushu yokuncamathelisa uphawu lokutywina, iyafumaneka kuzo zonke iintlobo zezikhongozeli: iplastiki, iglasi kunye nezitya zentsimbi. Kodwa ayenzelwanga iipropathi zokuthintela, iziphumo zingaphantsi kunezo zangaphambili, ke kuyacetyiswa ukuba kusetyenziselwe impahla eqinileyo yomgubo, njengokutya, izithambiso kunye neemveliso zokhathalelo lwempilo.
I-Peel elula yeAluminiyam yeFoyile yoKwenza ukutywina kweLiner
I-liner ye-Foam yinjongo ye-liner ngokubanzi, eyenziwe nge-polyethylene foam egudileyo. Ezi azenzi tywina, kwaye zihlala zisetyenziselwa ukuthintela ukuvuza.
I-Liner yeFom liner enye, i-EVA, i-EPE njl.
Kwi-elastic yayo ithumela isivumelwano kunye ne-port port.
Zilungele zonke iintlobo zokutywinwa kwesikhongozeli, zinokuphinda zisebenzise, ​​kodwa umphumo wetywina ngokubanzi.
Ingasetyenziselwa emva kunye ne-aluminium-iplastikhi ye-membrane edityanisiweyo kwaye umphumo wokutywinwa kungcono.
Ezona mpawu ziphambili kucoceko, uthuli, musa ukufunxa umphunga wamanzi, hayi ngenxa yokufuma okanye ubushushu ukutshintsha uzinzo.
I-Liner ezimbini zoBushushu boKhuseleko lokuTywina uBushushu
Le liner yenziwe ngefoyile ye-aluminium kunye nogcino lwogcino. Ifuna umatshini wokutywina. Emva kokuba umatshini wokungenisa ubonelela ngesitywina sobushushu esitywinwe ngokutyibilikayo kwimilebe yesikhongozeli, umaleko wealuminiyam utywinwe kwimilebe yesikhongozeli kwaye umaleko wesibini (ikhadibhodi yefom) ishiyeke kwikepusi. I-liner yesibini njengoko i-liner reseal ishiywe kwikepusi emva kwenkqubo yokufudumeza.
Iziqwenga ezibini zoKwenziwa kobushushu boTywina ngePhepha lePhepha
Isitywina seglu sinokwenziwa sibe sisiqwenga esinye okanye iziqwenga ezibini ngokweemfuno zabathengi. Kukho umaleko oshushu wokunyibilika kokuncamathela osalelwe kumaleko wokutywina we-liner ye-aluminium. Emva kwenkqubo yokufudumeza ngomatshini wokutywina okanye ngentsimbi yombane, umaleko wokubambelela uya kutywinwa emlonyeni wesikhongozeli. Olu hlobo lwe-liner luyafumaneka kuzo zonke iintlobo zezinto eziphathekayo.